WARBIXIN: Madax Waynaha FIFA Ee Gianni Infantino Oo Cadeeyay In Koobka Kooxaha Aduunka Ee Club World Cupka Qaab Kale Loo Badali Karo Iyo Tartanka Qaaramadaha Aduunka Ee Confedrations Cupka Oo Halis Ku Jira. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Madax Waynaha FIFA Ee Gianni Infantino Oo Cadeeyay In Koobka Kooxaha Aduunka Ee Club World Cupka Qaab Kale Loo Badali Karo Iyo Tartanka Qaaramadaha Aduunka Ee Confedrations Cupka Oo Halis Ku Jira.
27/10/2017 Mahamoud Batalaale
Madax waynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa si buuxda u qiray qorshe waqti badan laga fikirayay oo ah in aanu koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupku ahayn mid xiiso leh isla markaana gaadhsiisan heerka magaca uu xambaarsan yahay. Gianni Infantino ayaa si cad u sheegay in saamaynta Club World Cup aanu ahayn mid yeeshay saamayntii laga doonayay.
Gianni Infantino oo koobka kooxaha aduunka ka hadlaya ayaa yidhi: “Koobka kooxaha aduunka hadda ee Club World Cup waa tartan fiican laakiin xaqiiqdii muu yeelan saamayntii laga rajaynayay iyo horumarkii uu ku samayn lahaa kooxaha aduunka oo dhan”. Gianni Infantino ayaa hadalkan ka hor sheegay saxaafada kadib kulan ay FIFA yeelatay.
Gianni Infantino oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Waxaa waajib nagu ah in aanu eegno haddii aanu la iman karno wax khaas ah, wax cusub kaas oo kooxaha aduunka iyo xidhiidhada aduunka oo dhan caawin kara”.
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa doonaya inuu meesha ka saaro koobka qaaradaha aduunka ee loo yaaan FIFA Confederations Cup kaas oo ay ciyaaraan xulalka qaramada aduunka ee ku soo kala guulaysta koobabka qaaradaha ay ka dhisan yihiin waxayna FIFA qorshaynaysaa in ay ku badasho koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka oo horumarin wayn lagu sameeyay.
FIFA ayaa u muuqata mid aan muhiimada siinaysa dhaqaalaha badan ee ay ka soo xarayn karto in sarre loo qaado koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka oo ay isna sanad kasta wada ciyaaraan kooxaha ku soo kala guulaystay koobabka kooxaha qaaradaha ay ka dhisan yihiin.
Koobka FIFA Confederations Cup oo sanadkan lagu qabtay dalka Russia ee koobka aduunka marti galin doona ayaa u muuqda mid la cidhib tiri doono sanadka 2021 markaas oo ay FIFA samayn doonto tartanka cusub oo heerka kooxaha qaaradaha aduunka ah kaas oo ka koobnaan doona 24 kooxood isla markaana loo bixin doono ‘Super Club World Cup’.
Waxaa warkan shaaciyay wargaysyada Mundo Deportivo iyo Gazzetta dello Sport oo ka soo kala baxa wadamada Spain iyo Italy sida ayu kala horeeyaan. Kooxaha koobkan ka qayb gali doona ayaa ka soo bixi doona tartamada qaaradaha ay ka tirsan yihiin iyada oo la filayo in 12 kooxood ay ka iman doonaan kooxaha Yurub, 5 kooxoodna ay South America ka iman doonaan halka min 2 kooxood la siin doono Africa, Asia iyo North America. Waxaana hal koox la siin doonaa Oceania taas oo ka dhigaysa in 24 kooxood ay ku tartami karaan.
Qorshaha ayaa ah in siddeed group loo qaybiyo 24 ka kooxood ee tartankan loo samayn doono iyada oo groupkiiba ay saddex kooxood ku jiri doonaan waxaana wareega xiga u soo gudbi doona kooxaha soo guulaysta heerka groupyada.
Koobkan ‘Super Club World Cup’ ayaa afartii sanoba hal mar la qaban doonaa halka hadda Club Wold Cupka sanad kasta bisha December la ciyaaro iyada oo kooxo koobani ay ka qayb galaan isla markaana uu u samaysan yahay qaab aan xiiso lahayn, waxayna FIFA doonaysaa in ay koobka kooxaha aduunka ka dhigto mid ku dhawaan kara koobka aduunka.
Saamiga 12 ka kooxood ee Yurub ay heli karto ayaa lagu soo xulan karaa afarta kooxood ee ku soo guulaysta koobka Champions leaque afarta sano ee koobkan ka horeeya waxana la soo raacin doonaa afarta kooxood ee finalka soo gaadha halka afarta kooxood ee kale lagu soo xuli doono kuwa qiimaynta ugu saraysa ka haysta UEFA.
Koobka kooxaha aduunka ee FIFA Club World ayay sanad kasta ku tartamaan lixda kooxood ee ku soo kala guulaysta koobabka kooxaha ee qaaradaha aduunka iyo waliba koox ka socota dalka marti galinaya waana koob isku darsaday heer caalami iyo heer kooxeed balse aan lahayn tayadii laga doonayay taas oo ugu danbayn keeni karta in FIFA ay u wareegto qorshahan cusub ee la qiimaha noqon kara koobka aduunka oo heer kooxeed ah.